Ixabiso lamandla okuqhuba imoto yombane ngaphezulu kweminyaka elishumi ubuncinci ngama-30 amaxabiso entengo yoqobo. Ngokusetyenziswa kwamandla kujongene uninzi lweendleko zobomi bonke, uMarek Lukaszczyk weemoto kunye nomqhubi wedrive, iWEG, ucacisa iindlela ezintlanu zokuphucula ukusebenza kwamandla emoto. Th ...
Imakethi ye-Asynchronous yeemoto yokunyusa ingeniso yokujonga okuhle
Inguqulelo yamva nje ye-2020 yokufunda kwimakethi kwi-Asynchronous Motor Market equka i-103 eneetafile zedatha yentengiso, iitshathi, iigrafu, kunye namanani ekulula ukuwaqonda ngohlalutyo olunzulu. Ubhubhane weCoronavirus (COVID-19) uchaphazele zonke iinkalo zobomi kwihlabathi liphela. Oku kune ...
I-Zhejiang Lijiu Motor Co, Ltd. (emva koku ebizwa ngokuba yi "Zhejiang Lijiu Motor") ibekwe eTaizhou, Zhejiang, kwindawo yoqoqosho lwabucala. Ukuthembela kwisangqa esikhulu sezoqoqosho seYangtze River Delta, imeko-bume yendawo ikwindawo ephezulu. Yi-2 kuphela ...